Shiinaha Macdanta Rock Ore shiidi Ball Ball Powder Mashiinka Mashiinka iyo alaab-qeybiyeyaasha | Kordhi
Macdanta Rock Ore shiidi Mashiinka Ball Powder Mashiinka Mashiinka
Mashiinka kubbadda ayaa ku habboon in budada ay xoqdo nooc kasta oo macdan ah iyo qalab kale, milkiilaha kubbadda ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa labbiska, xirfadaha, qalabka dhismaha iyo warshadaha kiimikada iyo wixii la mid ah. Waxay u qaybsan tahay laba dariiq oo xoqin ah - qalalan iyo qoyan .Waxaa jira laba nooc oo ah milkiile kubbadeed, nooca xoqida iyo nooca daadadka ka dhashay sababo la xiriira siyaabo kala duwan oo loo soo daayo walaxda Mashiinka kubbadda ayaa ah qalab muhiim u ah in lagu shiido waxyaalaha la shiiday ka dib markii ay maaddadu jabtay, isla markaana uu mar kale burburin ku sii socdo. iyo milkiilaha kubbadda ayaa si ballaadhan loogu isticmaalaa khadka wax soo saarka budada ah oo ay ka mid yihiin sibidh, silicate, qalab dhisme nooc cusub ah, qalab diidan, bacrimin, labiska macdanta birta birta ah iyo birta aan birta ahayn, dhalooyinka dhoobada ah, iwm. nooca qalalan ama budada qoyan nooc kasta oo macdan ah iyo waxyaabo kale oo wax lagu shiidi karo ayaa xoqa.
Mashiinka kubbadda waa qalab muhiim u ah dib u habeynta. Waxaa si aad ah loogu isticmaalaa sibidhka, sheyga silicate-ka ah, qalabka dhismaha ee nooc cusub ah, maaddada dabka laga ilaaliyo, bacriminta kiimikada, birta madow iyo kuwa aan birta ahayn, dhalada, dhoobada iyo wixii la mid ah. shiiday ama geedi socodka qoyan ama habka qalalan.
Mashiinka kubbadda ayaa ku habboon ka faa'iideysiga iyo xoqidda dambaska duqsiga, dhagaxa nuuradda, ciidda quartz, budada aluminium, budada dhuxul dhagaxda, dhoobada birta, macdanta, potassium feldspar, macdanta birta, birta, birta, aluminium, silikoon carbide, alumina, dhuxul dhagaxda iyo qalabka kale.
Qaybta ugu weyn ee warshadda kubbadda qoyan waa dhululubo leh dhexroor yar iyo dherer weyn oo tartiib tartiib ah ugu wareegaya qalabka gudbinta. Maaddada waxaa laga quudiyaa marinka dhululubo iyo dhulka iyadoo ay saameyn ku yeelanayso birta birta iyo macdanta iyo is-shiididda. Maadada quudinta joogtada ah awgeed, cadaadiska ayaa ku riixaya sheyga meesha wax laga baxo iyo maaddada dhulka oo laga sii daayo marinka dhululubo. Roobka lagu rakibay godka millateriga waxaa loo cuskaday dheecaan qasab ah. Dusha sare ee saxarka ee dhululubo wuxuu yareeyaa macdanta xad-dhaafka ah, wuxuuna ka hortagaa in kubbada birta ay banaanka u soo baxdo. Isla duruufaha wax soo saar isku mid ah, awoodda wax soosaarka ee qalabka wax lagu dhejiyo ayaa ka weyn tan dhalada. Labada dhinac ee jirka dhululubada ah waxay korsadaan dhalista wareejinta halkii laga siibi lahaa, taas oo tamar badan keydineysa.
Cabirka wax soo saarka
Ф1200 × 2400 31 3.5 .25 0.074-0.4 1.6-5 30 9.5
Ф1200 × 4500 31 6.5 .25 0.074-0.4 1.6-5.8 4.5 13.1
Ф1500 × 3000 27 6.8 .25 0.074-0.4 2-6.3 75 16
001500 × 4500 27 10 .25 0.074-0.4 3-9 110 19
001500 × 5700 27 13 .25 0.074-0.4 3.6-11 130 24
Ф1830 × 3000 25 10 .25 0.074-0.4 4-11 130 25
Ф1830 × 3600 25 12 .25 0.074-0.4 4.3-12 155 32
Ф1830 × 4500 25 15 .25 0.074-0.4 4.5-16 155 33.7
Ф1830 × 6400 25 21 .25 0.074-0.4 6-17 210 38
Ф1830 × 7000 25 23 .25 0.074-0.4 6.5-18 210 43
Ф2100 × 3000 23 13 .25 0.074-0.4 5-15 180 32
Ф2100 × 3600 23 16 .25 0.074-0.4 6-17 210 35.8
002100 × 4500 23 20 .25 0.074-0.4 7-21 245 42.6
Ф2100 × 7000 23 31 .25 0.074-0.4 8-25 280 55
Hore: Gold Ore shiidi Mashiinka Mashiinka qoyan
Xiga: Portabel Alluvial Placer Dahab Dahab ah Trommel Sluice Box
Gold Copper Ore Stone Ball Mill shiidi Mill M ...
1100 1200 Model Gold qoyan Pan Mill Machine In Af ...
1400 1500 1600 Dahab Qoyan Mill Mill Chile Mill F ...
Gold Ore shiidi Mashiinka Mashiinka qoyan
Powder Samaynta shiidi Mill Raymond Mill Machine